हेम्प सीड तेलले जोर्नीशोथ र सर्कुलेशनमा मद्दत गर्न सक्छ - मद्दत MEHemp
कसरी हेम्प बीज तेल गठिया र रक्तस्राव को लागी मद्दत गर्न सक्छ
धेरै मानिसहरु जोर्नीशोथ हो भनेर झूटो विश्वास गर्छन् बुढेसकालको सामान्य भाग। यद्यपि यो सत्यबाट टाढा हुन सक्दैन। र भांग बीज तेल गठिया को प्रतिकूल प्रभाव रोक्न सक्छ।
केही व्यक्तिहरू जोर्नीशोथलाई खारेज गर्दछन्, तर यदि तपाईलाई चिन्नुहुन्छ जो यसबाट पीडित छ दुखाइ रोग, तपाईं को एक विचार हुन सक्छ कसरी यसले प्रतिकूल रूपमा जीवनको गुणस्तरलाई असर गर्न सक्छ। मद्दत गर्न नयाँ तरिकाहरूको बावजुद उपचार जोर्नीशोथ, धेरै मानिसहरू अझै पनि जैविक र प्राकृतिक विकल्प रुचि यो भयावह लडाई गर्न र लpp्गडोरोग।
यदि तपाईं गठिया उपचारको बारेमा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाई सायद उत्सुक हुनुहुन्छ कि हेम्प सीड तेलले तपाईलाई के गर्न सक्छ। यो हो CBD तेल भन्दा फरक र प्रस्ताव गर्दछ लाभको विस्तृत एर्रे, जसमा तपाईंको सर्कुलेशन सुधार गर्ने र जोर्नीशोथबाट टाढा जानु समावेश छ। हेम्प सीड तेल ले तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ हेर्नुहोस् फिर्ता तपाईंको जीवनको नियन्त्रण।
के मs हेम्प सीड तेल?
सीबीडी र हेम्प तेल वरिपरि hypa शुरू हुनुभन्दा अघि, व्यक्तिहरू पहिले देखि नै यसको धेरै फाइदाहरू बारे सचेत बिना हेम्प बीउ प्रयोग गर्दै थिए। धन्यबाद हेम्प र हेम्प उत्पादनहरूको बारेमा अनुसन्धानमा बृद्धि, we सिक्न जारी राख्नुहोस् हेम्प बीउका चमत्कारहरूका बारे र भिज बीज तेल।
हेम्प बीजको तेल हेम्प बीउबाट निकालिन्छ। हेम्प सीड तेलको प्रयोग हजारौं बर्ष पछि हुन्छ जब यो थियो प्रयोग ईन्धन, खाना, र औषधि को लागी। It प्रारम्भिक समयमा पनि प्रयोग भएको थियो २० औं शताब्दीमा प्रमेहको उपचार गर्न र यो मारिजुआना संग सम्बन्ध को कारण प्रतिबन्धित हुनु अघि युएस औषधालयमा सम्मिलित थियो।
हेम्प बीज तेलले आवश्यक फ्याट्टी एसिडहरूको उत्तम सन्तुलनको गर्व गर्दछ, जो तपाइँको खाना को एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो तपाईको सुरक्षा गर्न गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाको बिरूद्ध।
हेम्प बीजको तेल हुन्छ oमेगा-,, र यो पनि माछाको तेलमा देखा पर्दा, अनुसन्धान फेला पर्यो कि माछा तेल हृदयलाई फाइदा दिदैन। यो पनि छ साइड इफेक्ट. यसले बनाउँछ भात तेलviable वैकल्पिक र छ करीव दश व्यापक रूपमा लोकप्रिय माछाको तेल भन्दा गुना बढी शक्तिशाली।
हेम्प seed तेल एक उत्कृष्ट रचना छ, जुन छालाको फ्याट्टी एसिडसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो एक प्रभावी सामयिक उपचार बनाउँछ। यसबाहेक यसको आवश्यक फैटी एसिडहरू, भिंडी बीजको तेल भिटामिन ई मा पनि समृद्ध छ, जसलाई अणुहरू भनिन्छ tocotrienols र टोकोफेरोलहरू। अन्य खाद्य तेलहरूको तुलनामा, हेम्प सीड तेलमा टोकोफेरोलको सघन एकाग्रता छ, जुन चाहिँ अत्यावश्यक डिजनरेटिभ बिरामीहरूको विस्तृत श्रृंखलासँग लड्न। यसमा नि: शुल्क कट्टरपन्थी क्षति प्रतिरोध गर्न एन्टिऑक्सिडन्टहरू पनि हुन्छन्।
हेम्प बीज तेल र सीबीडी तेल बीच भिन्नता
हेम्प बीज तेल सीबीडी मा समृद्ध छ (cannabidiol), जुन एक अग्रणी कम्पाउन्ड हो जसले धेरै पीडालाई व्यवहार गर्दछ र व्यवस्थित गर्दछ ताकि चिकित्सा उद्योगमा यो खेल-परिवर्तक हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। यदि तपाईं अझै पनि हेम्पको संसारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सीबीडी तेलको साथ हेम्प सीड तेलको आदानप्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। यी दुई जबकि समान आनुवंशिक यौगिकहरू साझेदारी गर्नुहोस्, यी फरक पदार्थहरू हुन् जसले आफ्नै लाभ र प्रयोगहरूको सेट दिन्छ।
Hईम्प बीज तेल बोटको बीउबाट निकालिन्छ, र केवल औद्योगिक भांगले यसलाई बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस बीच, CBD तेल छ गरे फूल, डाँठ, र सन भाँडो को पातबाट। CBD तेल एक निकासी विधि छ कि CBD सामग्री को एक उच्च रकम ग्यारेन्टी छ किनकि यो धनी छt बोटमा cannabinoid। औटोमाr हात, hemp बीज तेल मात्र एक समावेश गर्दछ सानो को मात्रा CBD तर विशेषताहरु को एक पूर्ण मिश्रण terpenes र यसको आफ्नै क्यानाबिनोइड्सका आफ्नै फाइदाहरू छन्।
जबकि CBD तेल र हेम्प बीज तेल दुबै एउटै परिवारबाट मारिजुआनाको रूपमा बनेका छन्, दुबै do छैन टेट्राहाइड्रोकाबिनोलTHC), मनोवैज्ञानिक पदार्थ मानिसहरूलाई भावनाको मनोवैज्ञानिक संवेदना दिन्छ “high।"
हेम्प सीडको तेल तपाईंको मनपर्ने ककटेल जस्तै धेरै छ, तर रक्सीको सट्टामा, यो को एक मिश्रण हुन्छ क्यानाबिनोइड्स जुन तपाईंको शरीरमा CB-1 रिसेप्टर्सहरूको साथ प्रतिक्रिया गर्दछ। यसले तपाइँको एन्डोकानाबिनोइड प्रणालीलाई असर गर्छ (ECS)। तपाईंको ECS ले अभिन्न भूमिका खेल्छ in प्रभाव पार्छआईएनजी स्नायु प्रणाली, साथ साथै तपाईंको सबै नियमित कार्यहरू जस्तै संवेदी विकास, दुखाई स्वागत, र तरल पदार्थ उत्पादन।
हेम्प तेल आफै यी रिसेप्टर्समा संलग्न गर्दछ र यसलाई सक्रिय हुनबाट रोक्दछ। यसको कारणले गर्दा, तपाइँको दुखाइ उल्लेखनीय रूपमा कम भएको छ। हेम्प सीड तेल सूजन रोक्न र कम गर्नमा एक विजेता हो, जसले गठियासँग सम्बन्धित असुविधा कम गर्न सक्छ। भांग भाँडाको तेलमा रहेको क्यानाबिनोइड्स तपाईंको शरीरमा स्वाभाविक रूपमा उत्पादित उत्पादनमा मिल्दोजुल्दो छ, यो अझ प्रभावकारी हुन्छ।
जोर्नीशोथमा बीज तेलको मद्दत कसरी गर्न सकिन्छ?
जोर्नीशोथले एक वा बढी जोर्नीको सूजनलाई जनाउँछ। लक्षण आउन र जान सक्छ, र यसले सीमित संयुक्त समारोह, दुखाइ, सूजन, र कठोरता समावेश गर्दछ, जुन हल्का, मध्यमदेखि गम्भीरसम्म हुन सक्छ। धेरै व्यक्तिहरु यो पनि रिपोर्ट गर्छन् कि समय बित्दै जाँदा दुखाइ बढ्दै जान्छ। यसले धेरै व्यक्तिहरूलाई अंश दिन असक्षम बनाउँछदैनिक गतिविधिहरु मा अनुमान वा सरल गर्नुहोस् कार्यहरू जस्तै सीअंगआईएनजीभर्या .्ग
गठिया १०० भन्दा बढी प्रकार र सम्बन्धित सर्तहरू छन् कि सबै जाति, उमेर, र लि of्गका मानिसहरूलाई असर गर्न सक्छ। यो वास्तवमा यसलाई यू मा अक्षमता को एक प्रमुख कारण बनाउँछ.S., प्रभाव पार्छ300,000००,००० भन्दा बढी बच्चाहरू र 54 लाखौं वयस्कहरू। Osteoarthritis, जुन यसको सबैभन्दा सामान्य रूप हो, सामान्यतया भडकाउने औषधिहरू मार्फत व्यवस्थित गरिन्छ, जो छ गम्भीर साइड इफेक्ट र सहिष्णुता हुन सक्छ। गम्भीर अवस्थाहरूमा, कसैलाई लाग्नु पर्ने हुन सक्छ संयुक्त प्रतिस्थापन।
गठिया कार्टिलेजको बिट्स द्वारा हुन्छ र हड्डी जो पतित छ। यी रग सँगै जब तपाईं सार्नुहोस् वा फ्लेक्स गर्नुहोस्। जब यो स्नायु समाप्त छुन्छ, यो पीडा कारण र हड्डी र उपास्थि अधिक क्षति पैदा गर्दछ। यसको कारणले, गठिया एक दुष्कर्म चक्र हुन्छ जुन स्वतन्त्र हुन गाह्रो छ।
यदि तपाईं जोर्नीशोथबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ वा जो को हो थाहा छ भने, शुभ समाचार तपाईंलाई पर्खिरहेको छ। धेरै प्रकारका उपायहरू छन् जुन हेम्प सीड तेल तपाईंको लागि लाभदायक हुन सक्छ, विशेष गरी दु: खसँग व्यवहार गर्ने। भांग बीज तेल सक्छ संधिशोथ को दुखाई राहत। त्यो मात्र होइन, तर यसले यसलाई फैलाउने कोषहरूको अस्तित्व दर कम गर्न पनि सहयोग गर्दछ। केहि खुराक पनि सक्छु यी खतरनाक कोषहरूको मृत्युको कारण।
हेम्प तेल लुब्रिकेट्स जहाँ तपाईंलाई यो आवश्यक छ
तपाईंको कार ईन्जिनको बारेमा सोच्नुहोस्। यो तेल बिना राम्रोसँग काम गर्दैन, सही? तपाईंको हड्डीहरूलाई पनि यस्तै भन्न सकिन्छ। जब तपाईं हेम्प बीजको तेल लिनुहुन्छ, यसले धेरै-नेईको रूपमा काम गर्न सक्छतपाईंको प्रणालीको लागि समर्पित स्नेहन, र यसको कारणले पूरै सन्तुलित प्रोफाइल र gअम्मा-linolenic aसिड सामग्री, it तपाईको शरीरमा च to्गाइको क्षमता सुधार गर्न सक्छ साथै आफ्नो प्रतिरोध क्षमता बढाउनुहोस्।
हेफेमा ईएफएहरू उपस्थित छन् बीजको तेल अंग फंक्शन, मानसिक स्थिति, जीवनशैली, र कोशिका बृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने पनि गोडसेन्ड हो। को को मात्रा हेम्प सीड तेलमा उपस्थित सीबीडीले गठन रोक्दै सूजन कम गर्दछ cytokine, जसले त्यसपछि सूजन, कठोरता, र पीडा कम गर्दछ।
हेम्प बीज तेल तपाईंको रक्तस्राव को लागी आश्चर्य हो
जोर्नीशोथसँगै मद्दत गर्नुको अलावा हेम्प बीजको तेल रक्त परिसंचरणमा सहयोग पुर्‍याउन पनि परिचित छ। यो तेल रगत पातलो गर्न सक्छन्, जसले एक स्वस्थ रक्त परिसंचरण प्रणाली प्रमोट गर्दछ। जब तपाइँको सर्कुलेटियोएन राम्रोसँग काम गर्दैछ, तपाईं पनि हुनुहुनेछ तपाईंको रक्तचाप कम गर्दै, जसले मुटु मुद्दाहरू र मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको लागि जोखिम कम गर्दछ।
जब को तपाईको स्क्याल्पमा रक्त संचार सुधार गरिएको छ, यसले पनि गर्न सक्दछ बृद्धि तपाईंको कपाल बनावट, र आफ्नो कपालमा नमी दिनुहोस्। तसर्थ, तपाईं लाई बिदा भन्न सक्छ कपाल खण्डन
हेम्प बीजको तेलको लागि अन्य प्रयोगहरू
तपाईको जोर्नीशोथिको समस्याबाट राहत पाउन र तपाईंको सर्कुलेशनमा सुधार ल्याउने बाहेक त्यहाँ धेरै छन् थप फाईदा तपाईं हेम्प बीज तेल को उपयोग बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिले, तपाई स्वस्थ हर्मोनहरूको आनन्द लिनुहुनेछ यसको GLAसामग्री। यो प्रोस्टाग्लैन्डिन्सका लागि एक अविभाज्य घटक हो, जसले शरीरको तापक्रम र जलनको साथ मद्दत गर्दछ। एकचोटि तपाईंले हेम्प बीजको तेलको पूरक गर्नुभयो, तपाईंले आफ्नो GLA बढाउनुहुनेछ,जसले तपाईंको छालाको एलर्जी, तनाव, हृदय रोग, र मोटापाको साथ सहयोग गर्न सक्छ।
यदि तपाईं पीडित हुनुहुन्छ पाचन समस्या, तपाईं पनि आफ्नो हेम्प बीज तेल को लागी पुग्न सक्नुहुन्छ। एक समाधान चाहनेहरूका लागि, हेम्प बीउहरू यसको धनी फाइबर सामग्रीको उत्तर हुन् जसले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणाली सामग्रीलाई चीजहरू सहजै चलाउन दिन्छ।
अर्को सम्भावित फाइदा भांग बीज तेल त्यो हो शायदरोक्नुहोस् क्यान्सर। तपाईं यसको बारेमा धेरै सोच्न सक्नुहुन्न, तर यो रोगले तपाइँलाई एक तरीकाले वा अर्को तरिकामा असर गर्छ, चाहे यसले तपाइँको उपचार भोग्नुपर्नेछ, वा नजिकको साथी वा आफन्त हो। धन्यबादly, hemp बीज तेल आशा प्रदान गर्दछ।
यस बाहेक, हेम्प बीज तेल पनि को लागी लाभदायक छ छालायो एक उत्कृष्ट प्राकृतिक मॉइश्चराइजर को रूप मा कार्य गर्दछ। अन्य तेल जस्तो नभई, हेम्प बीजको तेल तेल र भारी महसुस गर्दैन। यो चाँडै छाला द्वारा अवशोषित गर्न सकिन्छ र तपाईं तुरुन्त नरम महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसलाई आफ्नो छाला, कपाल र न nailsहरूमा मालसाउन सक्नुहुनेछ, नुहाउने बाहेक।
चाहे तपाइँ डाईटरी वा बाह्य अनुप्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ, हेम्प सीड तेलको प्रयोग एक्जिमा र एक्ने मुद्दाहरूको लागि पनि राम्रो रणनीति हो,जुन EFA असंतुलनको कारणले हुन्छ। त्यो मात्र होइन, तर यसले छालाको बाहिरी तहमा फ्याट संरचना सुधार गरी बुढेसकालका प्रभावहरूलाई पनि प्रतिरोध गर्दछ। यो लाभ तपाइँ जवान र ताजा देख्नेछ।
हेम्प बीउ कसरी प्रयोग गर्ने तेल
हेम्प तेल एक प्राकृतिक, दिगो, सुरक्षित, र प्रिस्क्रिप्सन औषधीको व्यावहारिक विकल्प हो। यसको साइड इफेक्टको कम जोखिमको कारण, तपाईं यसलाई धेरै तरीकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं महसुस गर्नुहुन्छ गठिया दुखाइ आउँदैछ, यो सिफारिस गरिएको छ लागू हुन मुख्य रूपमा प्रभावित क्षेत्रहरु को सुरुवात रोक्न को लागी कुनै पनि असुविधा
यस बाहेक, तपाईं यसलाई तपाईंको दैनिक खानामा पनि समाहित गर्न सक्नुहुनेछ। हेम्प बीजको तेलमा मनमोहक नट स्वाद छ, जसले यसलाई अचम्मको बनाउँछ थप वा आधार डिप्स र ड्रेसिंगको लागिs। तपाईं जैतुनको तेलको सट्टामा यसको पिज्जा शीर्षमा राख्न सक्नुहुन्छ, वा यसलाई तपाईंको मनपर्ने डेसर्टहरूमा थप्नुहोस्. सन तरकारी, चामल, क्विनोआ, र मासुको स्वाद पनि पूरक गर्न सक्छ।
एक daily खुराक hemp बीज तेल मौखिक रूपमा संख्याको साथ आउँछous बेनिफिटहरू। If तपाइँ यसलाई समावेश गर्न चाहनुहुन्न तपाईं खाना मा, तपाईं सक्छ बस आफ्नो जिब्रो मुनि केहि बूँदाहरु राख्नुहोस्। यो विधि यसलाई तपाईंको रक्तप्रवाह द्रुतमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनेछ। अब, तपाइँको सबै छाला र शरीर पूरक, साथै खाना पकाउने तेल एउटै बोतलमा हुन सक्छ। जे होस्, यसको खाना पकाउनेमा सावधान हुनुहोस् किनकि यसमा धुवाँ कम छ।
हेम्प सीड तेलले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ
हेम्प बीज तेल प्रयोग गर्न सकिन्छ कि औषधी को लागी एक अपराजेय वैकल्पिक वैकल्पिक वैकल्पिक रहन्छ द्वारा पनि शाकाहारी र शाकाहारी Hel माp Me Hemp, हाम्रो भांग बीज तेल जैविक रूपमा १ 1998 XNUMX since देखि फार्म गरिएको छ। यस अनुभवको साथ एक शीर्ष स्तरीय प्राकृतिक उपचार आउँदछ जुन तपाईंको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न सक्दछ। जब तपाईं जोर्नीशोथबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ र तपाईंको सर्कुलेशन सुधार गर्नुहुन्छ, तपाईं असहनीय पीडाको चिन्ता नगरिकन अधिक समय खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। कहिल्यै फेरि।